Soo bandhigidda - Shabakadda Saadaasha Hawada | Saadaasha Websaydhka (Bogga 2)
Waxaan kuu sheegeynaa dhammaan muhiimadda Kanaalka Panama iyo taariikhdiisa. Wax dheeri ah ka baro shaqadan injineernimada.
Waxaan kuu sheegeynaa wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato Bering Strait iyo xiisaha ay leedahay. Halkan ka baro waxbadan.
Waxaan kuu sheegeynaa wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato da'da yar ee barafka iyo astaamaheeda. Halkan ka baro waxbadan.
10 sano kadib shilkii Fukushima
Waxaan kuu sheegeynaa warka ku saabsan shilkii nukliyeerka Fukushima ee Maarso 11, 2011. Sidee tahay xaaladdu?
Sidee loo noqdaa khabiirka saadaasha hawada
Waxaan kuu sheegeynaa wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato si aad u baratid sida loo noqdo saadaasha hawada. Ogow waxa ay tahay inaad barato iyo inta lacag ah ee ku soo gasho.
Maqaalkan waxaan kuugu sheegeynaa wax kasta oo aad uga baahan tahay inaad ka ogaato isleegyada Maxwell, astaamahooda iyo muhiimadda ay leeyihiin.
Waxaan kuu sheegeynaa wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato saacadda xiddigiska iyo astaamaheeda. Waxbadan ka baro qalabkan halkan.
Waxaan kuu sheegeynaa wax kasta oo aad uga baahan tahay inaad ka ogaato kalandarka Zaragozano iyo taariikhdiisa. Halkan ka baro waxbadan.
Waxaan si faahfaahsan u sharaxeynaa taariikh nololeedka Claudio Ptolemy oo dhan. Waxbadan ka baro saynisyahankan iyo waxqabadkiisa weyn.
Waxaan kuu sheegeynaa dhammaan astaamaha, kala duwanaanshaha noolaha, abuurista iyo hanjabaadaha Badda Woqooyi. Waxbadan ka baro badaan halkan.
Waxaan kuu sheegeynaa taariikh nololeedka oo dhan ee maskaxda ugu qarniga XNUMXaad, Stephen Hawking. Halkan ka baro waxbadan.
Waxaan kuu sheegeynaa wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato badda Coral iyo astaamaheeda. Waxbadan ka baro halkan.
Waxaan kuu sheegeynaa wax kasta oo aad uga baahan tahay inaad ka ogaato Gacanka Alaska iyo astaamahiisa. Halkan ka baro waxbadan.
Waxaan kuu sheegeynaa wax kasta oo aad uga baahan tahay inaad ka ogaato badda Java iyo astaamaheeda. Halkan ka baro waxyaabaha ku qarsoon.
Waxaan kuu sheegeynaa wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato waxa ay tahay saamaynta fata Morgana iyo sida ay u dhacdo. Waxbadan ka baro saamaynta dhalanteedka ah halkan.
Waxaan kuu sheegeynaa wax kasta oo aad uga baahan tahay inaad ka ogaato Gacanka Beershiya, astaamaheeda iyo muhiimadda dhaqaale.
Waxaan kuu sheegeynaa wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato waxa ay tahay barta cilmiga dhulka, astaamaheeda iyo muhiimadda ay leedahay.
Haamaha Hydrographic ee Spain
Waxaan kuu sheegeynaa wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato baraagaha biyaha ee Spain iyo muhiimadda ay leeyihiin. Waxbadan ka baro webiyadayada.
Waxaan si faahfaahsan kuugu sheegeynaa wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato Badda Adriatic iyo muhiimadda ay leedahay. Halkan ka baro waxbadan.
Maqaalkan waxaan kuugu sheegi doonaa dhammaan astaamaha, dhirta, duunyada iyo dhaqaalaha Badda Baltic. Halkan ka baro waxbadan.
Waxaan kuu sheegeynaa dhammaan sababaha Badda Alboran ay caan ugu tahay uguna muhiimsan tahay. Halkan ka baro.
Waxaan ku baraynaa wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato Badweynta Hindiya iyo astaamaheeda. Halkan ka baro waxbadan.
Qormadan waxaan ku baranaynaa wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato badweynta Baasifigga iyo astaamaheeda. Waxbadan ka baro halkan.
Qodobkaan waxaan kuugu sheegeynaa wax walboo aad ubaahantahay inaad ka ogaato wabiga caanka ah ee Rhine.
Maqaalkan waxaan kuugu sheegeynaa dhammaan astaamaha, cimilada, dhirta iyo xayawaanka webiga Segura, oo ka mid ah kuwa ugu caansan Spain.
Qormadan waxaan ku tusinaynaa qorrax-dhaca ugu wanaagsan adduunka iyo sida loogu raaxeysto.
Waxaan kuu sheegeynaa wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato caqiidada anthropocentrism iyo muhiimadda ay leedahay. Halkan ka baro waxbadan.
Qodobkaan waxaan kuugu sheegeynaa wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato astaamaha ugu waaweyn ee deyrta. Wax badan ka baro xilligan sanadka.
Qormadan waxaan ku tusi doonaa maxay yihiin astaamaha iyo asalka Biyo-xidheenka Aswan. Halkan ka baro waxbadan.
Qorrax ka soo baxa
Maqaalkan waxaan ku sameynaynaa liistada qorrax ka soo baxa ugu fiican iyo meesha aad ka arki karto. Waxbadan ka baro sixirka muuqaalladan.
Cape of Hope wanaagsan
Qodobkaan waxaan ku tusaynaa wax kasta oo ay tahay inaad ku aragto Cape Good Hope. Waxbadan ka baro meeshan quruxda badan.
Waxaan ku tusineynaa kuwaas oo ah kaydadka waaweyn ee Madrid kuwaas oo lagu ilaaliyo buugga. Halkan ka baro dhammaan waxa ku saabsan.
Maqaalkan waxaan kuugu sheegi doonaa taariikh nololeedkii Rosalind Franklin oo dhan iyo tabarucaadkii ay ku soo kordhisay adduunka sayniska.
Qodobkaan waxaan ku sharaxeynaa wax walboo aad ubaahantahay inaad ka ogaato howlgalka iftiinka iftiinka. Waxbadan ka baro ifafaalahan.
Waxaan kuu sheegeynaa dhammaan astaamaha, deegaanka iyo noocyada ugu waaweyn ee koox ka samaysan conifers. Halkan ka baro waxbadan.
Waxaan kuu sheegeynaa wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato xayawaanka Amazon iyo astaamaheeda. Baro wax badan oo ku saabsan saamaynta ay ku yeelato xayawaanka.
Si faahfaahsan u baro sida hirarka Nazaré u sameysan yihiin iyo astaamaha ay yihiin. Wax walba oo faahfaahsan ayaan halkan kuugu sheegaynaa.
Qormadan waxaan kuugu sheegi doonnaa dhammaan astaamaha, qaab dhismeedka iyo noolaha kaladuwan ee Badda Cortez. Ogow wax walba oo ku saabsan badaan janada.
Qormadan waxaan kuugu sheegaynaa dhammaan sifooyinka kaydadka biyaha ee Spain iyo sida ay ula tacaalaan abaaraha. Waxbadan ka baro halkan.
Maqaalkan waxaan kuugu sheegi doonaa dhammaan astaamaha iyo taariikhda qorraxda. Baro sida loo sameeyo mid iyo sida ay u shaqeyso.
Maqaalkan waxaan kuugu sheegi doonnaa taariikh nololeedka caanka ah ee Hipparchus of Nicea iyo waxyaabaha ugu waaweyn ee uu ku soo kordhiyay adduunka sayniska.
Qodobkaan waxaad ka heli kartaa dhammaan macluumaadka aad uga baahan tahay Badda Mediterranean-ka. Halkan ka baro waxbadan.
Waxaan kuu sheegeynaa dhammaan sirta iyo xiisaha sanadka cusub. Baro wax badan oo ku saabsan Sannadka Cusub ee Shiinaha iyo astaamahiisa.
Sawir gacmeed taariikhi ah
Qormadan waxaan kaaga sheegi doonnaa astaamaha sawir gacmeedka taariikhiga ah iyo ahmiyadda uu u lahaa horumarinta juquraafiga.
GIS (Nidaamyada Macluumaadka Juqraafiyeed)
Waxaan kuu soo bandhigeynaa waxa GIS yahay iyo muhiimadiisa maanta. Baro wax ku saabsan nidaamka macluumaadka juqraafiyeed iyo codsiyada mashaariicda.
Qormadan waxaan kuugu sheegaynaa taariikh nololeedkii Benjamin Franklin oo dhan, wax qabadkiisii ​​iyo hamigiisii. Wax walba ka baro mid ka mid ah dadka ugu caansan.
Qodobkaan waxaan kuugu sheegeynaa wax walboo aad ubaahantahay inaad ka ogaato Badda Aral iyo wixii ku dhacay inay qalalaan. Wax badan ka baro.
Qodobkaan waxaan kuugu sheegeynaa asalka iyo quraafaadka tiirarka Hercules. Waxbadan ka baro taariikhda Hercules.
Maqaalkan waxaan ku tusineynaa waxa aagaga waqtiga kala duwan ee Dunida ay yihiin iyo sida loo xisaabiyo. Waxbadan ka baro isbedelka waqtiga halkan.
Qodobkaan waxaan ku sharaxeynaa waxa loo yaqaan 'taphonomy' iyo muhiimada uu u leeyahay barashada lafaha. Halkan ka baro waxbadan.
Waxaan ku tusineynaa waxa khariidad iskudhaf ah ay tahay, waxyaabaha ay ka kooban tahay iyo sida loo fasirto. Waxbadan ka baro juqraafiga aasaasiga ah halkan.
Waxaan kuu sheegeynaa waxa loo yaqaan 'plankton', waxa uu ka kooban yahay, astaamahiisa iyo muhiimadiisa. Wax badan ka baro silsiladda cuntada.
Waxaan kuu sharaxeynaa wax walboo aad ubaahantahay inaad ka ogaato ciida deg degta ah iyo sida looga baxo. Ka baro wax badan oo ku saabsan dhacdadan joogtada ah ee filimada.
Qormadan waxaan kuugu sheegaynaa asalka dabaylaha duufaanka dabka iyo waxyeelada ay keento. Halkan ka baro dhacdooyinkan ba'an.
Waxaan kuu sharxeynaa waxa ay yihiin astaamaha, sameynta iyo cilmiga dhulka Gebiga Webiga Amazon. Waxbadan ka baro webiga adduunka ugu weyn.
Waxaan kuu sheegeynaa dhammaan sirta iyo astaamaha Loch Ness. Halkan gal si aad waxbadan uga ogaato harada ku taal halyeeyga.
Mashruucan waxaan kuugu sheegi doonaa dhammaan astaamaha, qaabeynta, dhirta, xayawaanka iyo hanjabaadaha Wabiga Niger. Waxbadan ka baro webiga Afrika halkan.
Qoraalkan waxaad ka heli kartaa dhammaan macluumaadka ku saabsan Badda Sargasso. Wax dheeri ah ka baro badahan xiisaha leh ee ku yaal Badweynta Atlantik.
Qormadan waxaan ku tusinaynaa astaamaha Badda Barents iyo ahmiyadda dhaqaale iyo noolaha. Halkan ka baro.
Waxaan ku baraynaa wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato Badda Marmara. Dhamaan astaamaha, jasiiradaha iyo meelaha dalxiiska. Wax walba halkan ka ogow.
Taariikh nololeedka Hypatia
Maqaalkan waxaad ka heli kartaa dhammaan macluumaadka ku saabsan nolosha, ficillada iyo dhimashada Hypatia. Wax dheeri ah ka baro xisaabyahankan iyo filosoofiga.
Qodobkaan waxaan ku ogaaneynaa wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato Badda Madow. Wax ka baro baddaan iyo astaamaha gaarka ah ee uu leeyahay.
Qormadan waxaan ku tusi doonnaa taariikh nololeedkii iyo ka faa’iideysigii Pythagoras, oo ahaa xisaabyahan iyo filosoof aad muhiim u ah. Soo gal oo wax ka baro.
Fiisigis-yahanka Isaac Newton wuxuu ku darsaday deeqo badan sayniska, isagoo wax ka badalay wax walboo la soo helay. Halkan gal si aad wax uga ogaatid taariikh nololeedkiisa.
Al-Khwarizmi wuxuu ahaa saynisyahan dhaqamo badan ku xeel dheeraa xisaabta, cilmiga xiddigiska, iyo juqraafiga. Halkan gal oo wax ka baro wax ku darsiga badan ee sayniska.
Magaalada ugu dheer Spain
Qodobkaan waxaan ku tusineynaa 10ka magaalo ee ugu sareysa Spain. Gal si aad u ogaato magaalada ugu sarreysa Spain iyo astaamaheeda.
Wax walba ka baro batroolka, dabeecada iyo urta macaan ee roobka. Waxaan kuu sharraxeynaa asalkiisa iyo sababta ay sidaas u urinayso. Galaya!
Waxaan kuu sharxeynaa waxa uu hirku yahay iyo sida ay u shaqeeyaan. Waxaad kaloo baran doontaa miisaska mawjadaha iyo muhiimadda kalluumeysiga. Kaalay oo wax walba baro.
Waxaan kuu sheegeynaa dhammaan sirta ku saabsan roobka kalluunka iyo raha. Waa dhacdo la yaab leh oo wax badan laga ogyahay. Soo gal oo soo ogow.
Saamaynta deegaanka ee alwaaxda iyo shooladaha dhuxusha ee miyiga
Isticmaalka alwaaxda iyo dhuxusha dhuxusha ayaa sababa saameyn baaxad leh oo deegaan ah oo ku yimaada miyiga. Halkan ka baro dhammaan waxa ku saabsan.
Robert Hooke wuxuu ahaa saynisyahan iyo falsafad muhiimad weyn u leh dunida sayniska. Halkan ka ogow muhiimadda uu leeyahay daahfurkiisu.
Heerkulbeegga WIFI waa kacaan adduunyada kululaynta. Si qoto dheer u ogow dhammaan howlaha qalabkan halkan.
Xagaaga San Miguel wuxuu dhacayaa ku dhowaad sannad kasta dhammaadka Sebtember gudaha Spain. Ma rabtaa inaad ogaato astaamaheeda?
Qoraalkani wuxuu ka hadlayaa sida dhibcaha biyuhu u samaysan yihiin iyo qaabka ay u dhacayaan iyadoo kuxiran xilligan. Ma rabtaa inaad wax intaa ka badan ogaato?
Qoraalkan waxaan uga hadlaynaa barnaamijyada kaladuwan ee jira si loogu digo digniinta roobka. Iyaga waxaad ku ogaan kartaa wakhti kasta goorta iyo meesha roob da'ayo.
Qoraalkani wuxuu ka hadlayaa guryaha iyo isticmaalka barafka qallalan. Haddii aad rabto inaad waxbadan ka ogaato oo aad barato sida guriga loogu sameeyo, kani waa boostadaada.
Maanta waa maalinta qoyaanka adduunka waxaana lagu xusaa abaar
Qoraalkani wuxuu ka hadlayaa xaaladda dhulka qoyan Maalinta Wetland World oo la xuso Febraayo 2. Ma rabtaa inaad wax intaa ka badan ogaato?
Waa maxay Khaliijka?
Qoraalkani wuxuu ka hadlayaa astaamaha iyo qeexitaanka qulqulka, farqiga u dhexeeya gacanka iyo galka iyo gulufyada waaweyn ee adduunka. Ma rabtaa inaad wax badan ka ogaato?
Fulkaanaha Mayón ee Filibiin wuu qarxi doonaa
Mawduucani wuxuu ka hadlayaa waxqabadka fulkaanaha ee fulkaanaha Mayón uu ku hayo Filibiin iyo dadka ay ahayd in la daad gureeyo.
Fiidiyowga oo kor u qaadi doona wacyiga ku saabsan saameynta isbeddelka cimilada
Kooxda Legacy Legacy-du waxay duubteen daqiiqadihii ugu dambeeyay nolosha orso cirif ah, dhibbane cusub oo isbedelka cimilada ah Kaalay oo waanu kuu sheegaynaa sababta.
Fulkaanaha Bali ayaa qarxaya
Buurta Agung waxaa ku yaal Fulkaanaha Bali waxayna ku dhici kartaa qarar qarax weyn. Ma rabtaa inaad wax badan ka ogaato fulkaanaha Bali iyo taariikhdiisa?
Adduunku sidee ahaan lahaa haddii heerka baddu kaco? Hadda waxaad ku ogaan kartaa khariidad is-dhexgal ah oo loogu talagalay in lagu saadaaliyo sida dhalaalku u saameyn doono.
Yurub waxay heshaa daruur shucaac ah Ruthenium 106 daruur
Daruur shucaac ah oo Ruthenium 106 daruur ah ayaa Yurub dul taal muddo bil ka badan. Baaritaanka IRSN wuxuu meesha ka saarayaa saameynta caafimaadka aadanaha.
Codsiyada Big Data waxay gaarayaan maareynta biyaha. Keydinta waraabka iyo maaraynta wanaagsan ayaa loo qoondeeyay inay yihiin musharixiin waaweyn mustaqbalka.
Saamaynta ay yeelan lahayd haddii volcanoes of Antarctica ay qarxaan
Waxaan sharaxeynaa cawaaqib xumada ka dhalan karta hadii dhowr volcano ay ka qarxaan qaarada Antartik mahadsanid daraasadihii ugu dambeeyay.
Maxay qabow u tahay habeennada cadcad?
Daruuruhu waxay leeyihiin laba jibbaar heer kulka iyadoo ku xiran hadday soo muuqanayaan maalintii ama habeenkii. Waan sharaxeynaa sababta ay ifafaaladani u dhacdo
Muxuu dareenka qabow marka barafka barafku u yaraadaa?
Waxaan sharxeynaa sababta marka barafka barafka dareeraha kuleylku u kordho iyo in ka fog inuu ahaado dareen waa saameyn dhab ah oo ku timaadda tamarta la sii daayo
ESA waxay ku sameyn doontaa tijaabooyin Lanzarote daraasiin saynisyahano ah oo ay weheliso ururo kale gumeysiga Mars
Sharaxaadda muuqaalka indhaha ee muuqaalka 'Brocken spectrum', iyo sidoo kale asalkiisa iyo sharaxaadda sababta ay u soo muuqaneyso iyo waxyaabaha u gaarka ah.
Dib u eegista Maydhashada Meteor Orionid. Asalka, sharaxaadda iyo sidoo kale sharaxaad ku saabsan halka laga eegayo iyo xaaladaha ugu fiican ee lagu qaban karo.
Sharaxaadda waxa jiilaalka Niyukliyeerku yahay, sida ay asal ahaan uga timaaddo waxa dhaca, iyo sidoo kale saamaynta dammaanadda ee ay ku leedahay nolosha noocyada
"Magaalada tijaabada ah" taas oo ku celcelin doonta magaaladii muddada dheer la sugayay ee Mars
Mars waxay noqotaa diiradda caalamiga ah ee indhaha oo dhan sababtoo ah gumeysiga la filayo ee soo socda. Hadda Dubai waxay u taagan tahay mashruucdeeda cusub.
Hurdada supervolcano Campi Flegrei waxay noqon kartaa mid ka khatar badan sidii la filayay
Daraasad dhowaan la sameeyay ayaa muujineysa in Campi Flegrei uu ka khatar badnaan karo sidii markii hore la filaayay. Markan magmadu meel kale ayey u socotaa
Musiibooyinkii dabiiciga ahaa ee waaweynaa ee dhacay Sebtember 2017. Isu soo aruurinta dhacdooyinka ugudub-weyn ee ka dhacay adduunka.
Baro sida nolosha Dunida u kacday iyo sida ay u sameysay xilligii Archaic Aeon. Mid ka mid ah waqtiyada ugu xiisaha badan ee cilmiga dhulka
Nalalka habeenkii, badda iyo kaynta
Bioluminescence waa iftiinka noolaha qaarkood ay soo daayaan habeenkii, qaar ka mid ah dhaqdhaqaaq, iyo kuwa kale oo ay ku dhacaan. Waan sharaxeynaa qaar
Qorraxdu waxay ku dhacdaa aagga magnetka dhulka
Dhul-gariirka magnetka ayaa la garaacay dhammaan bishii Sebtembar. Iyada oo cadceedii ugu xooganeyd ee tobankii sano ee la soo dhaafay.
Marka roobku u muuqdo inuu ka yimid filim cabsi leh
Ma taqaan dhammaan noocyada roobka? Sababtoo ah haddii aad raadineysid dhacdooyin yaab leh oo roob leh waxaan kuu sheegi doonnaa qaar ka mid ah waxyaalaha aan caadiga ahayn iyo kuwa argaggaxa leh ee jira
VIDEO: Sidee ayey dabeylaha xoogga duufaantu saameyn ugu yeeshaan jirka aadanaha?
Waxaan kuusoo bandhigeynaa muuqaal cajaa'ib leh, oo aad ku arki karto sida dabeylaha xoogoodu u saameeyaan jirka dhaqtarka cilmiga saadaasha hawada ee cajiibka ah.
Mexico waxay sii wadaa inay gariiriso dhulgariir kale oo xoogan
Dhulgariir cusub oo cabirkiisu yahay 6,1 ayaa shalay ka dhacay dalka Mexico. Mawjadaha dhul gariirka ee saameeyay dalka bishii Sebtember oo dhan uma muuqdaan inay dhammaanayaan
Waa maxay sababta danabku ugu soo muuqdo qaraxyada folkaanaha?
Sharaxaad ku saabsan sababta volcano badan ay ugu muuqdaan inay leeyihiin aaladda danabka qaraxyadooda. Sharaxaadda sababta in dhacdadan aysan u gaar ahayn duufaannada
Sharaxa taariikhda dabiiciga ah iyo tan aadanaha, taasoo sababtay in godkan weyn ee ololku uu gubto iyadoo aan cidna ogeyn goorta ay bixi doonto
Geysers, ama waxa la mid ah, biyaha dhulka hoostiisa ku xanniban oo laga soo saaray kululaynta ay la kulmayaan. Waxaan kuu sheegeynaa wax walba oo iyaga ku saabsan
Ku koray lamadegaanka? Maaha fikrad waali ah, waa wax horay loo qabtay
Waxaan kuu sharraxeynaa siyaabaha loogu koray lamadegaanka iyo qaabka loo bilaabay mashaariic kala duwan sanado badan oo horeyba u ahaa mid dhab ah
Cimilada ayaa door muhiim ah ka ciyaartay dayrtii Boqortooyadii Roomaanka
Waxaan kuu sheegeynaa sida qaboojinta cimiladu ay matalaad weyn ugu yeelatay ilbaxnimooyinkii hore ee wax ka beddelay koorsada iyo horumarka ilbaxnimada.
Maxay ahaayeen nalalka lagu arkay Mexico intii lagu jiray dhulgariir?
Iftiinka la yaabka leh ee iftiimiyay ee dhacay intii lagu jiray dhulgariirkii ka dhacay Mexico ayaa dad badan cabsi geliyay. Waxaan kuu sheegeynaa sababta ay u dhacday
Dhul gariir ayaa ka dhacay xeebta Chiapas, ee Mexico. Waxay ahayd tii ugu sarreysay ee laga diiwaan geliyo aaggaas oo cabirkeedu yahay 8,2 cabirka Ritcher.
Maxaa dhici kara haddii xiddig weyn uu ku soo dhaco Dhulka?
Cawaaqibka ka yimaada meteorite-ka ee ka dhanka ah meeraheenna, waxay lahaan doontaa cawaaqib xumo. Waxaan kuu sheegeynaa waxa dhici doona, wixii ka baxsan filimada ama mala-awaalka.
Baaxad u dhiganta Danmark oo ku taal Amazon ayaa loo xaraashay macdanta
Wareeg isku day ay sameysay Dowlada hada jirta ee Brazil, ayaa waxay ku dooneysay macdan qodista aag ka mid ah keymaha Amazon ee baaxada Denmark
Sharaxaadda aaladda 'hadic eon', sida dhulku u samaysmay, xaaladaha jiray, sida meeraha loo uureeyay iyo sida ay noloshu u bilaabatay jidkeeda
Shiinaha oo wajahaya mustaqbal xumida cuntada iyo tamarta tamarta ee biyaheeda, Shiinaha ayaa wada qorshe lagu horumarinayo biyahiisa aadka u wasakheysan.
Wasakhaynta deegaanka ee meeraha ku wareegsan ayaa gaadhaysa heerar aan waarayn
Daraasado ku saabsan saamaynta wasakhdu ku leedahay caafimaadka muddada dhow iyo tan fog iyo saamaynta ay ku leedahay carruurta iyo haweenka uurka leh.
Asalka, waxa uu yahay iyo sida loo adeegsado miisaanka loo yaqaan 'Beaufort' iyadoo loo eegayo dabaysha
Miisaanka 'Beaufort' wuxuu shaqeynayay 200-kii sano ee la soo dhaafay isagoo ah baaxadda xoogga dabaysha ee badaha iyo berriga. Asalka, taariikhda iyo faahfaahinta
Eeyaha buluuga ah ayaa ka muuqda dalka Hindiya wasakheynta darteed
Eeyo midab buluug ah leh ayaa maalmihii u dambeeyay ka soo muuqanayay dalka Hindiya. Saamaynta wasakhda ay ku dhacdaa way ka cabsi badan tahay.
"Wax Halkaa ka jira" oo lagula talinayo akhrinta isbeddelka cimilada
Buug-gacmeed ku saleysan xog ururin ballaaran oo cilmi-baaris ah oo ku saabsan dhacdooyinkii hore iyo kuwa soo socda, taas oo na geyn doonta Yurub mustaqbalka oo ay burburiyeen cimilada
Dusha sare ee 'Yellowstone supervolcano' ayaa is bedbeddelaya!
Khariidad ay soo saartay sahanka cilmiga dhulka ee Mareykanka waxay muujineysaa sida dusha sare ee supervolcano uu ku bilaabmayo inuu xumaado dhulgariirradii ugu dambeeyay awgood
Haddii heer kulka kor u kaco ... Maxaa loo qaboojin waayey meeraha?
Korodhka aan kala go ’lahayn ee heer kulka ayaa u horseeday saynisyahannada qaar inay soo jeediyaan tallaabooyin lagu qaboojiyo meeraha si ula kac ah.
Waa maxay faraqa u dhexeeya anticyclone iyo duufaanka?
Farqiga ugu weyn ee xagga farsamada, halka inta badan lala xiriirinayo waxa ay keeneen, iyo sida loo barto in lagu aqoonsado khariidadaha isobar.
Maxay xayawaanku u odorosi karaan dhulgariir?
Siyaabo kala duwan, xayawaanku waxay leeyihiin "dareenka lixaad" si ay u saadaaliyaan dhulgariir. Sidan oo kale, waxay ku falcelin karaan waqtiga.
Diyaarado waawayn oo waawayn oo dhowaan laga diiwaan galiyay Hawaii
Diyaarado waaweyn, oo sidoo kale loo yaqaan Goballada 'Lightning Gobins', ayaa ka mid ah kuwa loo yaqaan 'Blue Jets' iyo 'Sprites', mid ka mid ah ifafaalooyinka ugu yaabka leh ee la arko. Gaar ahaan kooxda weyn!
21 Agoosto waxaa jiri doona Wadarta Qorrax Madoobaadka, waxaan kuu sheegi doonaa sida loo arko waqtiga dhabta ah!
Meelaha laga arki doono madoobaadka qorrax madoobaadka, degellada baahin doona waqtiga dhabta ah, iyo sharraxaadda qorax madoobaadka kala duwan.
Ma ogeyd…? Xiisaha xiisaha leh ee aadan dhab ahaan ka ogeyn dhulkeenna!
Xulashooyinka xiisaha leh ee aadan ka ogaan karin meeraheenna! Kuwaas oo qaarkood hadda dhacayaan!
Ogsijiin la'aanta ayaa badanaa la xiriirta iyada oo aan ka sarreyno heerka sharka. Laakiin sidaas maahan. Waad ogtahay sababta?
Waqti iyo boos dhaafsiisan. Markay ilbaxnimadu socoto, waxay gumeysan kartaa galax u gaar ah, koonkan, waxayna ku noolaan kartaa meel ka baxsan nafteeda.
NASA waxay soo jeedineysaa qorshe hami leh… Difaaca Meteorites!
Waxay falanqeyn ku sameyn doonaan saameynta saameynta dayax gacmeed lagu bilaabay 21.600km / saac ka hor asteroid Didymos si loo qiimeeyo inta uu ka leexan karo dhabbihiisa.
Duufaanadii korantada ugu weynaa adduunka iyo diiwaanka Maracaibo
Maracaibo, badda Venezuela ee haysata Diiwaanka Dunida Guinness ee duufaanta korantada. Ku dhowaad 300 duufaanno ayaa halkaas ku soo dhaca sannad kasta!
Biyo-mareennada, mid ka mid ah duufaannada ugu caansan ee jira
Fiidiyowyo iyo sawirro ka soo baxa biya-dhaca ugu quruxda badan. Faahfaahinta ifafaalaha, iyo halka ay had iyo jeer ka dhacaan.
6,4 dhulgariir ku dhuftay jasiiradda Gos ee Gos
Caawa dhulgariir cabirkiisu yahay 6,4 magnitude oo ka dhacay badda Aegean ayaa ruxay jasiiradda Gos ee Gos wuxuuna sababay minitunami xeebta Turkiga.
Khataraha dhabta ah ee ka dhalan kara Duufaanta Cadceeda
Duufaanta cadceedu maahan dhacdooyin gooni ah, laakiin waxay u tahay duufaan weyn oo qoraxeed ... Maxay noqon doontaa cawaaqibka ilbaxnimadeenna?
Sawiradii ugu horreeyay ee ay soo saaraan baaritaanka hawada ee Juno, markii ay yimaadeen Jupiter. Xallinta sare, fiidiyowyada, iyo faahfaahinta Barta Weyn ee Cas.
Xog weyn iyo mustaqbalka saadaasha hawada
Xogta Weyn ma la dagaallami kartaa ifafaalaha cimilada ee na hanjabaya? Jawaabtu waa haa, waana horayba. Halkan waxaan ku sharaxeynaa sida aad u sameyso.
Mareykanku wuxuu ka tagayaa heshiiskii G20 ee Paris
Kulankii laba iyo tobnaad ee G20 ee Hamburg waxaa lagu calaamadeeyay jagooyinka cusub ee Mareykanka iyo xiisadaha ka jira magaalada.
Maxay geeduhu uga soo bixi la’dahay mitir cayiman dherer ahaan?
Sharaxaadda astaamaha kala duwan ee saameeya isla markaana sababa in geedaha aysan mar dambe ka soo korin dherer cayiman. Xadka kaynta.
Rays-ka Caalamka iyo Video Dhab ah oo saaran
Sharaxaadda shucaacyada aan caadiga ahayn ee adduunka ku wehliya oo ay weheliyaan fiidiyoow dhab ah oo laga duubay Siberia, iyo sharraxaad ku saabsan sababta ay dhacdadan layaabka leh u dhacday
The Terraforming ee Mars
Sharaxaadda soo jeedin macquul ah oo lagu bilaabayo gumaysiga meeraha Mars. Mid kamid ah mashaariicda gumaysiga ugu hanka badan.
Xilligii barafka ee ugu dambeeyay iyo sida aadamuhu ku yimid Ameerika
Taariikhda sida da'da baraf ee u dambeysay u dhacday iyo fure u ah fahamka sida bini'aadamku ugu guuleystey inuu ku gaaro America
Waa maxay biosphere?
Sow ma ogid waxa biosphere-ku yahay? Soo ogow sida ay u eg yihiin dhammaan gaaska, aagga adag iyo dareeraha ah ee dusha sare ee dhulka oo ay ku noolyihiin noolaha.
5-ta lakab ee cimilada ee ku xeeran Dhulka oo ilaaliya: Isku-darka, stratosphere, mesosphere, heerkulka iyo bannaanka. Mid walba maxaa loogu talagalay
'Kaddib Baraf', waa codsi muujinaya sida adduunku noqon doono dhalaalid ka dib
Ma jeceshahay inaad ogaato sida dunidu noqon karto ka dib dhalaalkii uu keenay cimilada adduunka. Hada waad awoodaa. Soo Galaya
Waa maxay heer kulku, sidee loo cabiraa maxaase loogu tala galay?
Heerkulku waa isbeddel muhiim ah oo saadaasha hawada oo adduunka oo dhan ayaa laga adeegsadaa Maxaad u baahan tahay inaad ka ogaato heerkulka?
Goorma ayaynu ku qori karnaa dayaxa, qorraxda iyo dhulka xarfaha waaweyn?
Waxaa jira waqtiyo ay macallimiintu tixgeliyaan qalad khaldan kuwa kalena aysan tixgelin. Goorma ayaynu ka faa'iideysan karnaa iyo sababta?
NASA waxay soo ogaatay toddobo meere oo nolol ku jiri kara
NASA waxay sameysay daah fur layaab leh: waxay heshay Solar System leh XNUMX meere oo nolosha taageeri kara.
NASA waxay dersa fulkaanaha Hawaii
NASA ayaa bilawday olole ay ku baareyso fulkaanaha Hawaii, taas oo ogolaan doonta in la qaado talaabooyin lagu ilaalinayo dadka hadii ay qarxaan.
Maalinta Qoyaanka Adduunka 2017
On February 2, World Wetlands Day ayaa loo dabaaldegaa si loo ilaaliyo nidaamyada noolaha kuwaas oo fure u ah badbaadada xoolaha iyo dhirta.
Trump wuxuu amrayaa bogga isbeddelka cimilada ee EPA in la xidho
Maamulka Trump ayaa ka codsaday Hay'adda Ilaalinta Deegaanka inay ka saarto boggeeda isbedelka cimilada boggeeda
Khariidad ayaa muujineysa hawada wasakhaysan ee aan neefsanno
Xariirka AirVisual wuxuu soo saaray khariidad is-dhexgal ah oo 3D ah oo muujinaysa heerarka wasakheynta adduunka.
Barafleyda, sidee loo aasaasay maxayna noocyadoodu ku tiirsan yihiin?
Ku dhowaad dhammaan dadku waxay jecel yihiin barafka. Laakiin miyaynu og nahay sida ay u sameysmaan barafka barafka, qaababka ay leeyihiin, iyo noocyada kala duwan ee jira?
Waa maxay qabowga dabaysha sideese loo xisaabiyaa?
Dareenka kuleylka ayaa laga yaabaa ama uusan ku kala duwanaan karin heerkulka dhabta ah ee aan joogno. Ma ognahay waxa qabowgu dabayl yahay iyo sida khubarada saadaasha hawadu u xisaabiyaan?
Harada Baikal ayaa ah tan ugu caansan adduunka.Ma dooneysaa inaad ogaato sababaha ay muhiimka u tahay iyo sida ay u noqon karto wax la yaab leh?
Saamaynta aqalka dhirta lagu koriyo
Runtii ma ogtahay doorka saameynta aqalka dhirta lagu koriyo, sida ay u dhacdo iyo saameynta ay ku leedahay meeraha? DHAMMAAN WAXAAD U BAAHAN TAHAY INAAD KA HELO halkan.
Fiidiyow naxdin leh ayaa muujinaya dhammaan dhulgariirradii 15-kii sano ee la soo dhaafay
Labaatankii sano ee la soo dhaafay, ninku wuxuu soo maray mid ka mid ah xilliyadii ugu naxdinta badnaa. Gali oo waxaad arki doontaa fiidiyow muujinaya dhulgariirrada ilaa 2001.
Waa maxay biome?
Waa maxay biome? Soo ogow aagaggan juquraafiyeed ee aan ka helno kooxo xayawaan iyo dhir ah oo laga yaabo inay halkaas joogaan awoodeeda la qabsi.
Weligaa ma isweydiisay sida xooluhu u saameeyaan deegaanka? Hadday sidaas tahay, soo gal oo waxaan ka jawaabi doonnaa su'aashan xiisaha badan.
Goobta loo yaqaan 'lithosphere' waxay ka kooban tahay qolofka dhulka iyo gogosha sare ee Dhulka. Waa qayb ka mid ah afarta qaybood ee dhulka.
Xilliga jiilaalka ayaa ku soo beegmaya in ay tahay maalinta ugu gaaban uguna habeenka dheer xagga woqooyiga iyo dhinaca kale ee koonfurta.
Ka dhigista meeraha mid cagaar ah markale la dagaalanka isbedelka cimilada
Joogtaynta kala duwanaanshaha noolaha iyo jabinta silsiladaha cuntada iyo wareegyada bayoolojiga waa hub wanaagsan oo lagula dagaallamayo isbeddelka cimilada.
Maxay tahay sababta xiddigta cirifku had iyo jeer loogu hagaajiyo cirka?
Waxaan sharaxaad ka bixinaynaa sababta ay Xiddigta Caanku mar walba cirka ugu taagantahay halka inta soo hartayna ay ku wareegaan dhulka. Sideed kuheli kartaa Polaris?
Dabaylaha Spain: Tramontana, Levante iyo Poniente
Dib-u-eegista astaamaha ugu waaweyn ee saddexda dabaylood ee ugu caansan Spain: Tramontana, Levante iyo Poniente. Maxay hawo u leedahay?
Tayada biyaha ee Yurub xitaa way ka liidataa sidii la filayay
Amarka Qaab-dhismeedka Biyaha wuxuu u soo jeedinayaa Midowga Yurub horumar la taaban karo oo ku saabsan tayada biyaha macaan marka la gaaro sanadka 2015. Maanta ujeeddadan waa mid ka fog in la buuxiyo, heerarka sunta ah ee ku jira meydadka biyaha ayaa aad u sarreeya.
Maxay yihiin dhibcaha dhibcaha dhibcaha?
Sida laga soo xigtay saynisyahanada NASA, dhibicda roobku uma eka qaab ilmo, laakiin waxay u egtahay bunburbur hamburger ah.
Ciyaaraha Olimbikada Jiilaalka. Sii socoshadaadu khatar ma ku jirtaa?
Kaliya lix ka mid ah magaalooyinkii horey u qabtay Olombikada Jiilaalka qarnigii la soo dhaafay ayaa maanta noqon lahaa kuwa qabow ku filan oo marti gelin kara. Xitaa marka la qiyaaso cimilada ugu muxaafidka ah, kaliya 11 ka mid ah 19-ka magaalo ee marti galiyay Ciyaaraha Olombikada Jiilaalka ayaa sidaas yeeli kara tobaneeyo sano ee soo socota sida lagu sheegay sahan ay sameeyeen Jaamacadda Waterloo (Canada) iyo Xarunta Maareeyayaasha ee Innsbruck (Austria).
Meesha ugu qabow dusha sare ee meeraha waxay ku taalaa buuraha Antarctic ee bariga Antarctic plateau halkaas oo heerkulku gaari karo qiyam ka hooseeya 92ºC oo ka hooseeya eber habeen qabow oo cad.
Dabaylaha Spain: Siroco, Lebeche iyo Cierzo
Dib-u-eegista astaamaha ugu waaweyn ee saddexda dabaylood ee ugu caansan Spain: Siroco, Lebeche iyo Cierzo.